10 Caado Oo Dadka Faqiirka Ah Sameeyan | Maan Kaab
Home Hormarinta Nafta 10 Caado Oo Dadka Faqiirka ah Sameeyan
10 Caado Oo Dadka Faqiirka ah Sameeyan
Ereyga faqiir markan maqalno waxa nagu soo dhacayo qof heerkiisa dhaqaalo uu hooseeyo laakin qofkaasi waxa jira ficilo ka dambeeyo faqiirnimadiisa una sabab ah inuu faqiir ahaado.
Dadka faqiirka ahi waxay leeyihiin caadooyin aan wanaagsanay kuwaso ku celinaya faqiirnimada ay ku jiran una diidaya inay taajiraan oo ay isku filnaansho dhaqaale gaaran
Qaabka aad uga fikirto dhaqalahaga waxay ka caawin doonta inaad hesho lacag xalaalah waxanad ka faaidaysa xeelado iyo xirfado cusub ood ku maarayso dhaqaalahaaga.
hadaba bahda maan kaab waxay halkan idin kugu soo gudbin doonta 10 caado oo dadka faqiirka ahi leeyihiin:
1. Dadka Faqiirka Ah Waxay arkaan dhibaatada ma arkaan xalkeeda.
2. Waxay Soo Iibsadan Waxaysan Awoodin.
3. Dadka Faqiirka Ahi Ma Akhriyaan Buugta.
4. Dadka faqiirka waxay ka fikiraan keydsiga lacagta halka taajirku ka fikiro maalgashi.
5. Waxay ku eedeyan khaladaadkooda dadka kale.
6. Cudur daar aan jirin
7. Waxay saaxib iyo wehel ka dhigtaan dad iyaga la mid ah ama ka hooseya.
8. Dadka faqiirka ahi way hurdo jecel yihiin.
9. Waxay ka baqaan khasaaraha.
10. Waxay ka cararaan dhibaatada.
Dhibaatooyinku waxay ku dhacaan qof kasta laakin farqiga u dhexeyo dadka faqiirka ah iyo dadka taajirka ah ayaa ah in dadka taajirka ahi raadiyaan xalka dhibaatada halka dadka faqiirka ahi ay caqabad aysan ka gudbi karin ku noqoto.
Si aad uga gudubto caqabadaha nolosha waa inaad raadisa xalka ku haboon.
Dadka faqiirka ahi waxay badanaa iibsadan waxaysan awood ulahayn, waxan aqaan dadka mushaarkooda inta aysan qaadan sii cuno yacni daymo badan sii qaato marki ay mushaarka qaatana daymo ku bixiyaan saasana lacagti mushaarka ahayd ku dhamaato isagoon waxna keydsan maalgashina aan samayn karin.
Warren Buffett waa ninka seddexaad ee ugu taajirsan adduunka, qorshihiisu waa inuu akhriyaa 500 bog maalin kasta.
Halka dadka faqiirka ahi ay tvga daawadan waqtigoodana ku dhumiyan waxan anfacayn iyo fadhi ku dirir.
Halka dadka taajiriinta ah ay waqtigooda ugu badan ku bixiyaan dhisida garaadkooda.
Dadka taajiriinta ah waxay ka fikiraan sidii ay lacagta ay maanta haystaan ay lacag kale ugu dhali lahayd wadada kaliya ay ku kori kartaa waa in aad wax ku maalgashato.
Halka lacagta la keydshay aysan dhaafin meeshay shalay joogtay waxayna ku celinaysa marxaladooda dhaqaale.
Dadka faqiirka ahi waxay inta badan saaran khaladaadkooda dadka kale halkii ay raadin lahaayeen xalka khaladka dhacay iyo sidii looga talaabi lahaa caqabadahan.
Halka taajirkuna qaladkiisa isagu tunka saarto kuna dadaalo sidii u khaladkaa u sixi lahaa uguna gudbi lahaa qaybaha ka haray yoolkiisa ama ujeedkiisa.
Dadka faqiirka ahi waxay sameeyan cudur daaro aan jirin iyago iska indha tirayo sidi ay naftooda uhormarin lahayeen.
Dadka faqiirka ahi hormarka noloshoda waxa hortaagan cudur daaro ay iyagu samaysteen sida dhibaato xaga familiga ah ama mid dhaqaale.
Dadka faqiirka ahi waxay saaxib ka dhigtan dadka hooseya ama lamida si aysan u dareemin in kaligood ay nolosha ka dhacsan nolosha si aysan udareemin walwal iyo dib udhac.
Nabigeena muxamed scw ayaa sheegay dhibaatada saaxiibka xun uu ku leeyahay nolosheena aduunyo iyo tan aakhiro.
Runtu waxay tahay, hurdadu way fiican tahay waana caafimaad Laakiin waa inaad wax u hurtaa si aad u gaarto meesha aad doonayso inaad gaarto. Laaakin dadka faqiirka ahi waxay jecelyihiin hurdada si xad dhaafa iyagoo subaxdi hurdada ku daaho habeenkiina xili wanaagsan seexan.
Qofku marku faqiir yahay waxa uu eeg kaliya khasaaraha ka dhalan karo hadu ficilka ku dhaqaaqo isagoon ka fikirayn haduu ku guulayso faaidada uu ka helayo, halka taajirku fiiriyo mira dhalka ficilka uu doonayo inuu ku dhaqaaqo.
Dadka faqirka ahi waxay ka cararaan wixii loolan iyo dadaal u baahan iyagoo doonaya wax ay si fudud ku helaan.
Halka taajirku leeyahay waxaasi haday fudud yihiin faaidadooda yar.
Hadii aad doonayso inaad gaarto isku filnaansho dhaqaale waa inaad u dhabar adaygta caqabadaha ku soo wajihi doono, jooji fikirka badan oo ficil samee
Next article10 Faaido Oo Basashu Timaha U Leedahay
Asad May 9, 2021 At 7:02 am
Waa qormo xiisa badan